Ndi enyemaka El Al nke Sun d’Or weputara uzo Tel Aviv-Dubrovnik
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndi enyemaka El Al nke Sun d’Or weputara uzo Tel Aviv-Dubrovnik
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Croatia na -agbasa ozi ọma • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Sun d'Or, onye enyemaka zuru oke nke El Al Israel nke na-ejikarị ika ahụ maka ọrụ nhazi oge na ọrụ iwu na-agakarị ebe ndị Europe, na-ebupụta ụgbọ elu kpọmkwem site na Tel Aviv gaa obodo Dubrovnik nke Croatian. Gbọ elu a ga-efe na Tuesday, na-apụ na Tel Aviv na 17:00 na site na Dubrovnik na 20:30, na oge ụgbọ elu ya dị ka elekere 3:20. Routezọ a bụ nke abụọ ụgbọ elu ụgbọ elu na-aga Croatia, na-agbaso ụgbọ elu nke ụlọ ọrụ ahụ dị na Zagreb.
Dubrovnik dị okpukpu abụọ dị ka ala nke King, isi obodo nke alaeze asaa na ihe nkiri TV nke ocheeze. Ọ dị ka Egwuregwu nke n'ocheeze bụ maka ihe dị ka ọkara nke 10% uto njem nlegharị anya kwa afọ obodo ahụ gbara kemgbe afọ ole na ole gara aga. Akwụkwọ Dubrovnik kwuru na site na Jenụwarị nke mbụ ruo na June nke afọ a, 393, 895 ndị ​​njem nleta nọrọ na Dubrovnik, nke ruru ịrị elu 30% site na otu oge n'afọ gara aga.
isi obodo ụgbọelu ndebanye Croatia na-apụ kpọmkwem ụgbọ elu ozugbo Dubrovnik El Al European Ebe Europe dị -esonụ game ọkara awa Israel January June eze ọdịda ebupụta malite ụgbọelu mba gara aga oge akwụkwọ kọrọ ọrụ ụzọ ndokwa oge nke abụọ Asaa show Sun gbapụ Tel Tel Aviv Ọganihu njem Daysbọchị Mọnde TV Ihe nkiri TV Zagreb